“घरबेटीको छोरीसँग लव पर्नाले म अहिले घर न घाटको भए, यस्तो होला भन्ने थिएन”-हरीको पिडा (भिडियो सहित) – Ap Nepal
घरबेटीकसिन्धुलीका हरि बराल केहि बर्ष देखि काठमाडौँ भाडामा बस्दै आएका थिए। काठमाडौँ बस्ने क्रममा घरबेटीकि छोरि संग हरि बरालको भेट पछि उनीहरु प्रेममा पर्छन। २१ महिनाको विदेश बसाइपछि हरि नेपाल आएका थिए।
हरिले विदेश जानु भन्दा अगाडी श्रीमतीलाई पसल बनाई राखेका रहेछन। हरि विदेश बाट आएपछि घरमा न त पसल छ न त श्रीमतीको गरगहना नै छ। माले श्रीमतीलाई सोधे पसल पनि छैन , कान घाटीमा पनि केहि छैन खोइ भन्दा उसले मैले खाए भनि।
म विदेश हुदा श्रीमती ले सस्थाबाट पैसा निकालेको रहेछ ,मलाई नै थाहा छैन २ बर्ष पछि मलाई फोन आएपछि मैले साउ मात्र बुझाए। फेरी मैले श्रीमती लाई सोधे मैले विदेश हुदा पैसा पठाएकै थिए कि निकालेको खोइ पैसा भन्दा मैले खाए मात्र भन्छे। काठमाडौँ फर्निचरमा काम गर्ने क्रम मा उ संग प्रेम भयो त्यसपछि ३ महिनामा हामी बिबाह गरेका हौ।
अहिले हाम्रो ३ महिनाको छोरि छ छोरि सहित उ म बाट सम्पर्क बिहिन भएको छ। हामी कोठामा भएको बेला मेरो धेरै पेट दुख्यो म हस्पिटल जान्छु भनि मैले म पनि त्यहि बाटो हुदै जाने हो मैले लैजान्छु भने। उसले होइन तपाई खान खेर ओफ़िस जानु म एक्लै जान्छु भनि।
मैले पैसा कति छ भनि सोधे उसले दुई हजार छ भनेपछि मैले तिन हजार दिए। म साझा घर आउदा रातको एक बजेको थियो , त्यतिखेर ढोका खुल्लै थियो। श्रीमती छिन् , मोबाईल त्यहि थियो , नम्बर कसैको छैन।
फेसबुक पनि ब्लक छ , दराज मा कपडा पनि केहि छैन , गहना केहि छैन। अर्को दिन मैले प्रसासन मा निबेदन दिए , श्रीमती हराएको १० दिन पछि छोरालाई फोन गरेर म धरान छु तेरो बुबालाई बनेस भनेर भनेकी थिइन्।
Prevविदेशीक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ? लकडाउनको बेला एअ रपोर्ट सम्म कसरी पुग्ने ? हेर्नुहोस्..
Nextगायक प्रमोद खरेलबारे फैलियो झुटो खबर , आपत्ति जनाउदै खरेल मिडियामा (भिडियो हेर्नुस)
धेरैले आशा नै मारेकी अनितालाई माया नै मायाले जितेर नि,को पारेर छा:डे महान पति बिनोदले !